10Pcs သစ်သားဖောင်ဒေးရှင်းမိတ်ကပ်တံဆိပ်ခတ်သည့်ပစ္စည်းများ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
$2.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $4.99
အရောင်ကိုင်တွယ် D E F B C ပန်းရောင် A J H I G
ယူနိုက်တက်စတိတ် / ။ တရုတ် / အီး ယူနိုက်တက်စတိတ် / အီး တရုတ် / F ယူနိုက်တက်စတိတ် / ခ တရုတ် / ဂ ယူနိုက်တက်စတိတ် / ဂ တရုတ် / ယူနိုက်တက်စတိတ် / ပန်းရောင် တရုတ် / အေ ယူနိုက်တက်စတိတ် / အေ တရုတ် / ခ တရုတ် / ပန်းရောင် ယူနိုက်တက်စတိတ် / ဂျေ ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ တရုတ် / ငါ ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ တရုတ် / ဂျေ ယူနိုက်တက်စတိတ် / အက်ဖ် တရုတ် / ဂျီ ယူနိုက်တက်စတိတ် / ဂ China / H
10Pcs သစ်သားဖောင်ဒေးရှင်းမိတ်ကပ်တံဆိပ်တပ်ဆင်ရန်အစုများ - ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
brush ပစ္စည်း: သိုးမွှေး Fiber
အရေအတွက်: 12 စုတ်တံ
အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ: မိတ်ကပ်မိတ်ကပ်၊ Beauty Face Brush
ပစ္စည်း: နိုင်လွန် + သစ်သား
Brush လက်ကိုင်သတ်မှတ်ချက်များ: တိုင်
သက်ဆိုင်သူများ - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ်ပညာရှင်
သင်ဟာအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားမိတ်ကပ်ပညာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Pro Brush Set ကိုသင့်အတွက်ဖန်တီးပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးပြည့်စုံသောသားရေကိရိယာတန်ဆာပလာတွင်မျက်နှာ၊ မျက်လုံးနှင့်နှုတ်ခမ်းများအတွက်ကျွမ်းကျင်သောအရည်အသွေးရှိသောစုတ်တံများကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ဤအစုတ်တံများကိုဒြပ်နှင့်မြင်းဆံများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်သင်နှစ်သက်သောမိတ်ကပ်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
အထုပ်ထဲ၌ပါဝင်သည့်အရာ: 10 X ကိုမိတ်ကပ် Brush
မိန်းကလေးများ၊ စုတ်တံများသည်အေးမြ။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိပြီးလှပသောအရောင်များဖြစ်သည်။ ငါဇန်နဝါရီလ 21 ရက်နေ့တွင်အမိန့်, ဖေဖော်ဝါရီလ 18 ရက်နေ့တွင်ရောက်ရှိလာ,4ကြီးမားသောစုတ်တံအထူးကွက်၌ရှိကြ၏, တစ် ဦး ချင်းစီဖြီးသီးခြားအိတ်၌လည်းရှိခဲ့သည်။ အနည်းငယ်အနံ့ရှိနေပြီ၊ အဝတ်လျှော်ပြီးသွားရင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဒီထက်နည်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကပြaနာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းအတွက်ကောင်းသောစုတ်တံ။
ထိပ်တန်းလူတန်းစား! အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ ပုံသည်နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသည်။
Pędzel bardzo miękki။ Jednak dotarł w dwóchkawałkach ...
Pedido: 15.11.19 Recibo: 30.01.19 (CDMX2ခုနှင့် XNUMX ခု) သည် preciosas ဖြစ်သည်။ ငါ encantaron! Muy tupidas, el pelo es sintéticosintético, pero súper suave, muy rico al tacto, el color de las brochas es hermoso, el mango es de plástico resistente ။ Súper recomendadas ။